[ဂျပန်သို့လာရောက်သည့်နည်းလမ်းများ] -အလုပ်အကိုင်နှင့်နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်စုစည်းမှု – MYANDEMY🇲🇲
“ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ချင်လိုက်တာ”“အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်း/တက္ကသိုလ်တွေမှာနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်အဖြစ်သင်ကြားချင်လိုက်တာ” စသည်ဖြင့်စဥ်းစားနေကြတဲ့မြန်မာပြည်မှလူများအတွက်၊ ဒီဆောင်းပါးကဂျပန်ကိုဘယ်လိုလာရောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းများ ကိုလေ့လာနိုင်ရန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုသာပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိလိုပါကဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြပါရှိသောသက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုချင်းစီ၏အသေးစိတ်စာမျက်နှာများကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရန်5steps
ဂျပန်မှာပညာသင်ဖို့အဆင့်4steps
ဒီစာစုမှာမှဂျပန်နိုင်ံငံကိုလာ‌ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဆင့်(၅)ဆင့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုလက်ရှိချိန်မှာလျှောက်ထားကြတဲ့ဗီဇာအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ “Gijinkoku（技人国）”နည်းပညာဆိုင်ရာအတတ်ပညာရှင်,ကျွမ်းကျင်လုပ်သား（特定技能）၊ အလုပ်သင်လုပ်သား（技能実習）စတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
“ လစာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အလုပ်ကခက်တယ်” စတဲ့ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်နေရသူများလည်းရှိကြပါတယ်။
Step1. မိမိကိုယ်ကိုနားလည်ခြင်း ကိုယ်ကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကိုလုပ်ချင်သလဲ? (Will)
ဥပမာ။ ။ ဂျပန်ဘာသာစကားကိုနေ့စဥ်သုံးပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်
Step2. အလုပ်ကိုနားလည်ခြင်း လုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်သောအရည်အချင်း/ကျွမ်းကျင်မှုများဟာလည်းမတူညီကြပါဘူး။
“ဘယ်လိုအရည်အချင်းမျိုးလိုအပ်လဲ”၊ “မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာကဘာလဲ” (Must)စတဲ့အချက်များကိုသေချာစွာနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသောသူများ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Step3. အလုပ်ရွေးချယ်မှုဆိုငရာညွှန်းပြစက်ဝိုင်းများရဲ့ထိစပ်မှု မိမိရဲ့ဆန္ဒ(Will),ကျွမ်းကျင်မှု (Can)နဲ့ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာ (Must) စတဲ့အချက်တွေကို
သေချာစွာသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်မျိုးကိုရှာဖွေရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အထက်ပါအချက်သုံးချက်ရဲ့ ညွှန်းပြစက်ဝိုင်များထိစပ်မှုဧရိယာ ဟာကြီးလေကောင်းလေလို့ဆိုကြပါတယ်။
Step4. အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခန့်အပ်လွှာရယူခြင်း မိမိရွှေးချယ်လျှောက်လမ်းလိုတဲ့ဦးတည်ချက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာရှာဖွေခြင်း၊ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကနေရှာဖွေ
ဒီလိုအလုပ်လျှောက်တဲ့နေရာမှာ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သား” ဒါမှမဟုတ် “နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်” အဖြစ်လျှောက်ထား
Step5. Residential Status/VISA ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် “နေထိုင်ခွင့်”
ကုမ္ပဏီ၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကနေ နေထိုင်ခွင့်/ဗီဇာရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာနည်းပညာဆိုင်ရာအတတ်ပညာရှင်ဒါမှမဟုတ်ရုံးဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဒီဗီဇာအမျိုးအစားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။. “Gi”ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်က “Gijutsu””နည်းပညာ”ကို အတိုကောက်ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပြီး၊ “Jin” ဆိုတာက “Jinbun-chishiki(Humanities)”လူ့အရင်းအမြစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။“Koku” ဆိုတာကတော့“Kokusai-gyomu(International Services)” အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး။
အားလုံးကိုပေါင်းစပ်ကာ “Gijinkoku”လို့ဒီဗီဇာအမျိုးအစားကိုခေါ်တယ်. ဒီ ဗီဇာအမျိုးအစားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကို “အဆင့်မြင့်ပြည်ပလူ့အရင်းအမြစ်များ”လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်များ 1) ပညာအရည်အချင်း (a or b)
a. တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ဘွဲ့ရ
ရရှိနိုင်သောအလုပ်အကိုင်များ အိုင်တီစစ်စတမ်ဒီဇိုင်း၊ မားကတ်တင်းနှင့်အပလီကေးရှင်းdevelopment စသည့်။
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာအမျိုးစားဟာဂျပန်နိုင်ငံတွင်လုပ်သားရှားပါးသောလုပ်ငန်းခွင်၁၄ခုမှာပြည်ပမှလုပ်သားများအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသောဗီဇာအမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ။ သက်ကြီးပြုစုရှောက်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း။)
လိုအပ်ချက်များ 1) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်မြင်ရန်။
2)ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု (a or b)
b.The Japan Foundation Basic ဂျပန်ဘာသာစကားစာမေးပွဲ
ရရှိနိုင်သောအလုပ်အကိုင်များ အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊သက်ကြီးပြုစုရှောက်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်လုပ်ငန်း၁၄မျိုး။
လိုအပ်ချက်များ 1) ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု
ဒီစာပုဒ်မှာတော့”ဂျပန်နိုင်ငံမှာပညာသင်ရန်အတွက်အဆင့်၃ဆင့်”နဲ့”ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်း”၊သက်မွေးမှုသင်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်နဲ့ ဘွဲ့လွန်ကျောင်း/MBAနဲ့ပါတ်သက်တာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ “ဂျပန်ဘာသာစကားမပြောတတ်သေးလို့”ဒါမှမဟုတ်
“ကျောင်း၊ကျုရှင်လခနဲ့နေထိုင်စရိတ်တွေ”ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးတော့ဂျပန်ပညာတော်သင်အိပ်မက်ကိုလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင်ယူလေ့လာနိုင်ပြီး၊ ပညာတော်သင်ဆုလျှောက်ထားခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာပရိုဂရမ်တွေမှာပါဝင်ကာEnglishဘာသာစကားလေ့လာခြင်းများပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။များစွာသောရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရန်လိုအပ်တဲ့ယျေဘုယအချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းစုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့သက်ဆိုင်ရာကျောင်း/တက္ကသိုလ်များမှာစုံစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာပညာသင်ဖို့အတွက်အောက်ပါအချက်များသိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံက ကျောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေဟာသတင်းအချက်အလက်အစုံအလင်ကိုဝက်ဘ်
Step1. Decide what you want to learn မိမိရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု၊တတ်မြောက်လိုသောကျွမ်းကျင်မှုတို့အပေါ်မူတည်ပြီးသင်ယူလိုသောဘာသာရပ်ကိုဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပါ။ ကြိုးစားလိုသောလှုံဆော်မှုကသာသင်ကြားမှုကိုရေရှည်စွဲမြဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Step2. Research schools and programs ဘယ်လိုပရိုဂရမ်မျိုးနဲ့ကျောင်းတွေရှိနေသလဲ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်
Search Engines တွေဥပမာ Google မှာအလွယ်တကူရှာ
ဖွေနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ။ ။ “xxxx University Admission”လို့စာရိုက်သွင်းကာရှာဖွေခြင်း)
Step3. Application and Admissions မိမိသင်ကြားလိုသောဘာသာရပ်ကိုသင်ယူနိုင်ပြီးကျောင်းဝင်ခွင့်
ရှိသောကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ပရိုဂရမ်တွေကိုရွေးချယ်လျှောက်
Step4. Admission Procedures and Student VISA ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုအောင်မြင်ပါကကျောင်းအပ်ရန်လို
ဂျပန်စာဘာသာစကားကျောင်းများသည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကသတ်မှတ်ပြငှာန်းထားသောကျောင်းများဖြစ်ပီးဂျပန်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် ကျောင်းပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ရှိပါသည်။အဆိုပါကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်ဂျပန်စာဆည်းပူးနေကြ
အဓိကလိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ –(၁၂) နှစ်ပညာရေးပြီးဆုံးထားရမည်။
-JLPT N5 နှင့်အထက်ဂျပန်စာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။
လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများကိုလေ့လာရပြီးချက်ချင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မည့်စွမ်းရည်ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်နိုင်သည့်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသက်သာချောင်ချိရေး၊ အိုင်တီ၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ အချက်အပြုတ်၊ ဖက်ရှင်နှင့်စီးပွားရေးစသည့်နယ်ပယ်အားလုံးတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
အဓိကလိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ – (၁၂) နှစ်ပညာရေးပြီးဆုံးထားရမည်။
ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းအဆင့်များ၊ ပညာတော်သင်ဆု၊ English ဘာသာဖြင့်သင်ကြားနိုင်သော
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခြားသောတက္ကသိုလ်များလိုပဲ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းများဧပြီလမှာကျောင်းအပ်လက်ခံကြပါတယ်။ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများမှာတက်ရောက်ရန်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုတေသနမျိုးကိုပြုလုပ်ဆိုတဲ့အစီ
အဓိကလိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ -တက္ကသိုလ်ရမှတ်မှတ်တမ်း(Grade Point Average, GPA) သို့မဟုတ် ဘွဲ့လက်မှတ်
-English ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် (TOEFL/IELTS/TOEIC)
MBA（Master of Business Administration)<<URL
အဓိကလိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ -လုပ်ငန်းခွင်အတွ့အကြုံ
–ပညာအရည်ချင်း (တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ သို. 16 years of education is common)
-ဂျပန်ဘာသာ သို့ English ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု
Previous post [ Japan နိုင်ငံ MBA – ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော MBA ဘွဲ့ ရွေးချယ်နည်း၊ အကျဉ်းချုံး] မြန်မာလူမျိုးအတွက်အကြံပြုသောအင်္ဂလိပ်ပရိုဂရမ်များ
Next post [ဂျပန်သို့ဘယ်လိုရောက်လာသလဲ] – အသက်မွေးမှုကျောင်း